Tuulooyinku waxay ku baaba'aan Jasiiradaha 'Solomon Islands' isbeddelka cimilada darteed | Cusbooneysiinta Cagaaran
Daraasad ayaa lagu ogaaday in ee Jasiiradaha Solomon Islands shan jasiiradood ayaa gebi ahaanba la waayey sababo la xiriira kor u kaca heerarka badda; lix kale ayaa la kulmaya wax la mid ah sidaa darteed tiradu way sii kici kartaa.
Sirilo Sutaroti, 94, hogaamiyaha qabiilka Paurata, ayaa sheegaya in sare u kaca heerarka bada ay sababeen waa inay guuraan ilaa qaybta ugu sarraysa jasiiradda iyo dib-u-dhiska magaalada.
Warbixin ay dhowaan soo saareen Waraaqaha Cilmi-baarista Deegaanka, saynisyahanno isku xidhka kor u kaca heerka badda isbedelka cimilada bini aadamku sababay. Daraasadu waxay calaamad u tahay markii ugu horeysay ee qofkasta uu si gaar ah u eego luminta xeebta Jasiiradaha Solomon Islands marka loo eego kuleylka adduunka.
Warbixintan ayaa imaaneysa xilli magaalooyinka xeebta, oo ay dagnaan lahaayeen dhowr boqol oo qof sida Sutaroti, ku faafay si ay uga dhex muuqdaan kooxaha qaarkood halkaas oo ay jiraan buuro dhaadheer oo nolosha ku habboon.
Jasiiradda Taro, a Northwest Atoll Village laga bilaabo Jasiiradaha Solomon Islands, waxay noqotay caasimad goboleedkii ugu horreeyay meeraha ee dadku ugu guuraan meelo kale sababo la xiriira isbeddelka cimilada.
Jasiiradaha Solomon, taas oo waxay ka kooban yihiin lix jasiiradood oo waaweyn oo qiyaastii kumanaan ka yar, waa mid ka mid ah quruumaha ugu yar ee ku nool jasiiradaha Baasifigga. Qiyaastii nus milyan qof ayaa ku nool qiyaastii 25.000 oo kiilomitir oo laba jibbaaran. In kasta oo ay u muuqan karto wax iska soo horjeedda, helitaanka meel ammaan ah oo lagu wici karo guriga ayaa caqabad ku noqotay dadka deggan jasiiradahan.
20-kii sano ee la soo dhaafay heerka badda wuxuu si aad ah u kordhayay hareeraha Jasiiradaha Solomon. Simon Albert, oo ka mid ah qorayaasha daraasadda ee jasiiraddan ayaa sidaas qaba maqnaanshaha xeebta jasiiradaha qaarna waa hage wax yaabaha soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » General » Noticias » Shan jasiiradood iyo magaalooyin dhowr ah ayaa ku baaba'a Badweynta Baasifigga isbeddelka cimilada darteed
laulasi carrasco dijo
Ma taqaan magaca jasiiradaha mar hore la waayey?
Ku jawaab laulasi carrasco
Sawirkan ilaaliyaha ah ee ku xigta wiyisha ugaarsiga ayaa muujinaya damaca aadanaha